Warbixin: Maxaa kasoo baxay Shirkii Madasha ee. Muqdisho lagu soo gabgabeeyey Shalay. ???? – Gedo Times
Warbixin: Maxaa kasoo baxay Shirkii Madasha ee. Muqdisho lagu soo gabgabeeyey Shalay. ????
28th January 2016 admin Wararka Maanta 0
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Sharmarke, oo shalay kulan la qaatay ka qeyb galayaasha shirka iyo wakiilada bulshada caalamka, ayaa uu muujiyay sida loogu baahan yahay in la tix galiyo arrintan ay dowladda so jeedisay. Waxa warmurtiyeedka lagu sheegay in caalamku uu soo dhaweeyay arrintaasi halka maamulladana ay qaarna soo dhaweeyeen kuwana ay walaac ka muujiyeen.
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo xalay shir jaraa’id qabtay ayaa sheegay in Puntland aysan aqbali doonin heshiiskaas, isagoo tilmaamay in aanay xilligan muhiim aheyn in dib loogu laabto nidaamka beelaha ee 4.5.
War hadda soo dhacay: Ciidanka Kenya oo isaga baxay Buula guduud Xilli ay Deegaano badan faarujiyeen.
BALANBAL: banaanbax looga soo horjeedo dilalka lagu hayo shacabka gobolka gedo